बिदेश/प्रवास – Page2– TajaNepal
५० आयोजनालाई श्रोत जुटाउने घोषणा ?
आर्थिकMarch 24, 2019
काठमाडौं । उखानै छ नाच्न जान्दैन आँगन टेढो ! नेपाकलो वर्तमान सरकार त्यही लाइनमा चलेको छ । यो सरकारले ३ वर्ष अगाडि सम्पन्न दाता सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसार दाताहरुबाट पुननिर्माणमा के कति रकम लियो त्यसबारे सत्तासीन पार्टी…
सडकमा कामको छनक देखियो
ठेकेदारले देखाउन थाले काम काठमाडौँ । सरकारले काम चोर ठेकेदारहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने तयारी थालेपछि नेताहरुकै संरक्षणमा रहेका ठूला ठेकेदारहरुले चैत लागेसँगै काम देखाउन थालेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निगरानीमा राखेको बताइरहँदा दलनिकट…
प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको रहस्य
EnglishMarch 21, 2019
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा गएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा गठन भएपछि प्रचण्डको यो…
विसङ्गतिविरुद्ध नेकपाको ध्यान
काठमाडौँ । राज्य निरङ्कुश हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि विद्यमान ऐन कानुनको प्रयोग गर्दा राज्य स्वभावैले निरङ्कुश देखिने गर्छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीचको द्वन्द्व यसैमा केन्द्रित छ । सरकारसँग विप्लवको…
न्यायालय सुधार्न चोलेन्द्रको ध्यान
कला/साहित्यMarch 21, 2019
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हुनुअगाडि विवादमा तानिएका चोलेन्द्रसमशेरले आफू पदमा पुगेपछि दुनियाँलाई दङ्ग बनाइदिए । चोलेन्द्रका टिमका दीपकराज जोशी, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रका बारेमा अनेक प्रचार भए । देशको राजस्वसँग जोडिएको एनसेल प्रकरण, क्यासिनोको रोयल्टी विवाद…